PressReader - Ilanga: 2017-10-12 - VUKA UZITHINTITHE
Ilanga - 2017-10-12 - Izindaba - * Uma ufuna ukuthola uMfu Zondo bukhoma, vakashela ibandla lakhe njalo ngeSonto ngehora le-10. Siku-110 Williams Road uma usuzofika eDalbridge Train Station.
KUNEZINTO eziyingozi okufanele siziqaphele empilweni okungathi uma singaziqapheli zibulale ikusasa lethu futhi zilimaze nabantu abasondelene nathi.
Isibonelo nje, kufanele siqaphele empilweni ukuthi ungathathi isinqumo udiniwe, linda kwehle igwebu. Kule ngosi yanamuhla ngizogxila kubantu abenza izethembiso kodwa bangazifezi kanti bebeneme noma bebanjwe yinjabulo ngesikhathi bezenza.
Ungathembisi kanti ngeke usifeze isethembiso. Ungasenzi isithembiso kanti usenza nje wenziwa yinjabulo ngoba kubuhlungu ukuthenjiswa into kanti ngeke yenzeke.
Uma ungaboshwa ngamaphoyisa, bakhona abangakukhipha ngebheyili, uma ungaphathwa yisifo esithile bakhona odokotela abangakwelapha futhi nje mangithi ngisho ungaboshwa ngamadimoni bakhona abefundisi abangakuthandazela bese ukhululeka kodwa kubuhlungu ukuboshwa yizethembiso.
Abanye bethu baze bathembise abantu imishado kanti bebezisholo nje, wukuthi babephethwe wukwenama, injabulo kubo yayimi ngenhla. Kangisayiphathi eyalaba abathembisa ukuthumela abakhongi emizini yabantu kanti bakhohlisa abantu abadala nje.
Kuze kulungiswe izindlu kupendwe nezindonga, kutshelwe nezihlobo kuthiwa umkhwenyana uyeza nelobolo kodwa lutho, ube-zisholo nje ebanjwe wukwenama. Ngiyaphinda ngithi ungasenzi isithembiso kanti ngeke usifeze.
Uma uthanda umuntu, mthande nje, kalikho elibi lapho kodwa uma usumthembisa umshado kanti uyazidlalela nje, sekungolunye udaba lolo. Kufanele sazi empilweni ukuthi uma sithembisa kanti ngeke sifeze, sisuke sizwisa ubuhlungu obukhulu lo muntu esimthembisile.
Kumele sibheke empilweni uma ngabe sineme ngoba sithembisa kuze kweqe futhi nje abanye bethu uma beneme baze bachithe imali bethokozisa abangani babo. Umuntu uyimosha yonke imali ngenxa yokwenama, ngakusasa aphaphame esezisola, esekhalisa okomdlwane inkece isiqedwe yisi- nqumo asithathe eneme.
Kufanele sazi ukuthi impilo kayithathwa ngelukuluku kodwa ulinda igwebu lithi ukwehla, ungawuvuli umlomo kanti igwebu lisachichima, kungaba yigwebu lokucasuka noma ngelokwenama kakhulu uze uthembise into engekho.
Ngiyesaba ukukhuluma ngezingane ezakhiwa ngoba abantu beneme kakhulu, ezathi uma sezivela oyedwa wazisola. Ukukhula-ke empilweni wukwazi ukuzibamba, uzilawule ngoba kubuhlungu ukuba yisigqila nokuzisola ngenxa yento owayikhuluma kanti wawudiniwe nento owayithembisa kanti weneme kakhulu.
Isono sokwenama kakhulu kakukhulunywa ngaso kanti yisona esibulale ubudlelwano obuningi kubantu.
Uma weneme kakhulu uthembisa nangento ongeke uyenze. Le nto ifana nokuthi ungabosithatha isethembiso somuntu ophuzile futhi oneme kakhulu.
Nathi-ke esithenjiswayo, masingasheshi isithembiso sisithathe ngelukuluku size sizitshele, ubomlinda umuntu umbheke ukuthi nasezinsukwini ezilandelayo usawaphinda yini amazwi akuthembise wona mhla eneme.
Masibagade oThembisile, sibagade oThembi, sibagade noThembeka, sibagade oThemba, sibagade kakhulu oSithembiso bathembisa kodwa bangafezi.
*UPastor Sthembiso Zondo ngumeluleki nomethuli wezinkulumo ezakhayo. Uzobe ephendula imibuzo yabafundi ngezinkinga zempilo nezothando kwiLANGA LangeSonto. Abafuna ukuxhumana noma ukummema, inombolo ithi: 073 795 2292. Ungamshiyela nomyalezo kuFacebook: Sthembiso Zondo Fan Page noma kuWhatsApp: 082 070 8034
Ngiyesaba ukukhuluma ngezingane ezakhiwa ngoba abantu beneme.